Sonic Robo Blast 2: Sonic uye Doom Nhaka mune blender | Linux Vakapindwa muropa
Sonic Robo Blast 2: paunoisa Sonic uye Doom Nhaka mumusanganisi
Kunyangwe zvinhu zvichiita zvirinani nekufamba kwenguva, Linux haisi yakanakisa chikuva chemitambo yemavhidhiyo. Kufanana neMacOS, hazvisi kunyanya nekuti vazhinji vanogadzira vanoisa pfungwa yavo mukugadzira yeWindows kana yezvinyaradzo, asi nharaunda inewo chekutaura nezvayo nemazita akadai se Sonic Robo Blast 2, nevamwe vanopikisa vane mufananidzo chaiwo zvekuti vanogona kutiita kuti titende kuti vane SEGA chaiyo kumashure kwavo.
Sezvatinoverenga mu peji reprojekti repamutemo, Sonic Robo Blast 2 ndeye fan-yakagadzirwa yakavhurwa sosi 3D mutambo (fangame) nezve iyo hedgehog Sonic. Yakagadzirwa ichishandurwa vhezheni yeDoom Legacy, iyo Doom port. Vagadziri vayo vakafemerwa neyekutanga Sonic mitambo yeSega Genesis uye vakaigadzirisazve neiyo 3D dhizaini. Mutambo hauna kupera zvakadaro, asi unotova nemabasa mazhinji, mazinga, vavengi uye zvese zvinodiwa kuti ufare uye ufare.
Sonic Robo Blast 2 fangame
Iyo yeLinux vhezheni inowanikwa Chemhondoro flatpak package, saka kuti tiise iyo tinofanirwa kuve nerutsigiro runogoneswa mukugovera kwedu. Kana tangoiswa uye kumhanya kekutanga, isu tinopinda mune dzidziso kuti tidzidze mafambiro kubva, seDambudziko kana imwe FPS, tinogona kufambisa hunhu munzira dzese panguva imwecheteyo nekamera. Makiyi ekutanga ndeaya:
Kamera: yekufambisa makiyi.
Svetuka: space bar.
Kutenderera: Kuruboshwe Shift.
Ini pachangu, ndinokurudzira kugadzirisa marongero kana tisingagadzikane neakare apfuura. Kana, zvirinani, kana tine chero mutyairi aripo, shandisa; Ini handisi kugona pamitambo, asi matambudziko andinofamba nawo muvhidhiyo mhedzisiro yekutamba nekhibhodi sezvo inogadzirirwa nekutadza.
Kana iwe uchitsvaga mutambo wekutandara nawo paLinux, uye hauna kuronga kuisa chiutsi, Sonic Robo Blast 2 inogona kunge iri izvo zvawanga uchitsvaga. Hongu, ndinovimba uri nane kupfuura ini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Sonic Robo Blast 2: paunoisa Sonic uye Doom Nhaka mumusanganisi
Aurora OS vagadziri vaisanganisira kugadzirisa memcpy muGlibc
EndeavorOS inoshandura gore rimwe chete, iine simba rakawanda uye zvirongwa zvekuenderera mberi ichikura